Ukwenza ngomatshini iinxalenye - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Machining Co., Ltd. yasekwa ngo-2007, ibekwe Dongguan, China, i "ikomkhulu lemveliso ehlabathini", egubungele indawo engaphezu kwama-20,000 square metres, ezikhethekileyo ngqo iindawo oomatshini processing kwaye sele kudlule i-ISO9001 : Isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015.
I-K-Tek Machining ibonelela ngeenkonzo ze-OEM / i-ODM, sinokwenza ngokwezifiso ukuveliswa kwazo zonke iintlobo zamalungu oomatshini ngokuchanekileyo ngokweemfuno zabathengi, iimveliso ezinxulumene noomatshini, i-elektroniki, i-automation, izithuthi, ezonyango, amandla amatsha kunye nezinye iinkalo. Ukuze kuqinisekiswe iimfuno ezisemgangathweni zabathengi bethu, singenise izixhobo zokuqhubekeka phambili kunye nezixhobo zovavanyo ezifana noMatshini we-axis ezintlanu (i-DMG), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, Ukuphakama kokuGqibela kunye noMhlalutyi weMathiriyeli njl. Ukusuka eJamani, eJapan, eSwitzerland naseMelika. Inkampani inezixhobo ezaneleyo zokuqhubekeka ngokuchanekileyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, umgangatho wezinto ezichanekileyo unokuhlangabezana nemigangatho yemizi-mveliso yehlabathi, iimveliso ezithengiswa phesheya.
Izinto zethu eziqhelekileyo ziyintsimbi engenasici, i-aluminium, ubhedu, isinyithi sekhabhoni, iiplastiki zobunjineli kunye nezinye iintlobo zensimbi ye-alloy. Sinokubonelela ngonyango lobushushu kunye nonyango lwomphezulu ohlukeneyo kubathengi: ipolishi, i-anodizing, i-galvanizing, i-nickel plating, i-silver plating, i-passivation, i-powder spraying, njl.
Njengomvelisi we-OEM, sinokubonelela ngokuQiniseka kweeNxalenye zoMatshini ze-CNC kuluhlu olubanzi lwezixhobo:
Izinto eziphathekayo: i-aluminium alloy, ubhedu, insimbi engenasici, isinyithi esincinci, i-zinc alloy, i-PMMA, i-Teflon kunye njl.
Umphezulu Gqiba: Polish, Anodize, Zn / Ni / Kr nesingxobo, Gold / Silver nesingxobo, Inactivation, unyango Ubushushu, Powder ukutyabeka njl
• Izixhobo: (3 & 4 & 5) i-axis cnc Machining, oomatshini abaqhelekileyo, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, ngaphakathi / Isitshisi sangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, i-Height Gauge kunye ne-Material Analyzer njl.
• Machining ngqo ukunyamezelana: 0.005-0.01mm.
• Ixabiso lokurhabaxa: ngaphantsi kweRa0.2.
• Umsebenzi ophezulu, isixhobo esifanelekileyo, isixhobo, isixhobo sokusika.
• Izahlulo eziveliswe ngokuhambelana nemizobo okanye iisampulu.
• Inkonzo ekhawulezileyo, enobungcali nenkxaso, izisombululo zoyilo kunye nezintsha.
• Zalisa uluhlu lwezakhono, izivumelwano zokubonelela zexesha elide.